consciousness – Dhammadīpa
Posted on 27 May 2017 by Ashin Sopāka
“That which is called ‘mind’ and ‘mentality’ and ‘consciousness’ arises as one thing and ceases as another by day and by night. Just asamonkey roaming throughaforest grabs hold of one branch, lets that go and grabs another, then lets that go and grabs still another, so too that which is called ‘mind’ and ‘mentality’ and ‘consciousness’ arises as one thing and ceases as another by day and by night.” – SN 12.61
“Yañca kho etaṁ, bhikkhave, vuccati cittaṁ itipi, mano itipi, viññāṇaṁ itipi, taṁ rattiyā ca divasassa ca aññadeva uppajjati aññaṁ nirujjhati. Seyyathāpi, bhikkhave, makkaṭo araññe pavane caramāno sākhaṁ gaṇhati, taṁ muñcitvā aññaṁ gaṇhati, taṁ muñcitvā aññaṁ gaṇhati; evameva kho, bhikkhave, yamidaṁ vuccati cittaṁ itipi, mano itipi, viññāṇaṁ itipi, taṁ rattiyā ca divasassa ca aññadeva uppajjati aññaṁ nirujjhati.”
“ရဟန်းတို့ စိတ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မနောဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဝိညာဏ်ဟူ၍လည်းကောင်း ဆိုအပ် သော သဘောတရားသည် ညဉ့်၌လည်းကောင်း၊ နေ့၌လည်းကောင်း တခြားတစ်ပါးသာလျှင် ဖြစ်၏၊ တခြားတစ်ပါးသည် ချုပ်၏။ ရဟန်းတို့ ဥပမာသော်ကား ကြီးစွာသော တောအုပ်၌ လှည့်လည်သော မျောက်သည် သစ်ကိုင်းကို ကိုင်ရာ၏၊ ထိုသစ်ကိုင်းကို လွှတ်၍ တစ်ပါးသော သစ်ကိုင်းကို ကိုင်ရာ၏၊ ထိုသစ်ကိုင်းကိုပင် လွှတ်ပြန်၍ တစ်ပါးသော သစ်ကိုင်းကို ကိုင်ယူပြန်ရာ၏။ ရဟန်းတို့ ဤအတူသာလျှင် စိတ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မနောဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဝိညာဏ်ဟူ၍လည်းကောင်း ဆိုအပ်သော သဘောတရား သည် ညဉ့်၌လည်းကောင်း၊ နေ့၌လည်းကောင်း တခြားတစ်ပါးသာလျှင် ဖြစ်၏၊ တခြားတစ်ပါးသည် ချုပ်၏။”
“Còn cái gọi là tâm này, là ý này, là thức này, này các Tỷ-kheo, cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt đi là khác. Này các Tỷ-kheo, ví như một con khỉ trong khi đi lại trong rừng núi, nắm lấy một nhành cây, bỏ nhành cây ấy xuống, nó nắm giữ một nhành khác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức này cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt đi là khác.”
Top: Common Tailorbird
Bottom: Dark Necked Tailorbird
Posted in Dhamma	| Tagged anicca, consciousness, dhamma, impermanence, mind